Shina dia nanamboatra sy nanamboatra fitaovana fanapoahana fitaovana - Puhua
Home > Products > Fitaovana fanapoahana basy
Fitaovana fanapoahana tifitra no manadio takelaka, andry, rafitra manala ny refy, ny loto ary ny harafesina. Ny efitrano misy fiarovana dia misy fananganana vy mihidy nopetahany takelaka vita amin'ny fingotra ao anatiny mba handraisany angovo fitifirana sinematika. Ny fantsona dia nalahatra tamin'ny fandikan-teny sy ny fihodinana, nifandimby, tamin'ny alàlan'ny fitaovam-pitaterana ho any amin'ny efitrano fipoahana notifirina.
Shotblasters dia manangana renirano metaly fitetezana haingam-pandeha. Ny fananganana fitaovana fanapoahana tifitra dia mamela hamorona sy handamina ny lalana mikoriana. Ny famerenana ny tifitra efa niasa dia mitohy hatrany amin'ny tsingerina mihidy izay mitifitra tifitra amin'ny alàlan'ny alàlan'ny fitaterana visy amin'ny ascenseur ao anaty mpampisaraka, esorina ny evator ary avy eo ao amin'ny hopper.
Milina fanodinana tifitra variraraka
Q69 Turntable Type Shot Blasting Machine Ity milina ity dia ampiasaina amin'ny fanadiovana ny faritra fanariana sy fanaovana forging, faritra matevina, rindrina manify izay tsy afaka ny hifandona aorian'ny fitsaboana ny hafanana. Izy io dia afaka manala ny fasika mifatotra, mizana, sns. Izy io koa dia azo ampiasaina hanamafisana ny fanodinana ny fitaovana sasany, lohataona lovia, sns.
Ny Masinina Trolley Shot Blasting Machine dia manadio takelaka, andry, rafitra manala ny refy, ny loto ary ny harafesina. Ny efitrano misy fiarovana dia misy fananganana vy mihidy nopetahany takelaka vita amin'ny fingotra ao anatiny mba handraisany angovo fitifirana sinematika. Ny fantsona dia nalahatra tamin'ny fandikan-teny sy ny fihodinana, nifandimby, tamin'ny alàlan'ny fitaovam-pitaterana ho any amin'ny efitrano fipoahana notifirina.
Amin'ny alàlan'ny Machine Type Blot Blasting
Ny roller amin'ny alàlan'ny karazana fitifirana milina fanapoahana manadio takelaka, andry, rafitra manala mizana, loto ary harafesina. Ny efitrano misy fiarovana dia misy fananganana vy mihidy nopetahany takelaka vita amin'ny fingotra ao anatiny mba handraisany angovo fitifirana sinematika. Ny fantsona dia nalahatra tamin'ny fandikan-teny sy ny fihodinana, nifandimby, tamin'ny alàlan'ny fitaovam-pitaterana ho any amin'ny efitrano fipoahana notifirina.
Turbine blast shot mivantana an'ny torolàlana mivantana dia kodiarana fipoahana mahery vaika, ny tombony dia endrika tsara tarehy, fanamafisana matevina, tabataba ambany, toekarena ary fiarovana ny tontolo iainana. Manana ny herinaratra lehibe indrindra sy ny taham-pahefana mahery setra lehibe indrindra. Ampiasaina amin'ny karazan-karazany rehetra izy io milina fanadiovana fipoahana. Ny vidin'ny pabrikan'ny turbine shot shot ho an'ny karazana milina fanapoahana tifitra rehetra. Ny orinasanay dia manana turbine voatifitra fantsom-bozaka manafosafo turbine, mivantana-driven shot blasting turbine andcurved blade shot blasting turbine ho safidin'ny mpanjifa.
Fitoerana fanapoahana fasika
Q69 Sand Blasting Pot no tontolo iainana indrindra ary ny fomba mahomby indrindra amin'ny fanesorana ireo karazana harafesina sy harafesina rehetra avy amin'ny takelaka vy, fantsona, rafitra vy, h beam, fantsom-by, profil, zoro vy sy fantsona sns.
Easy-Maintainable Fitaovana fanapoahana basy dia azo namboarina manokana avy any Puhua. Izy io dia iray amin'ireo mpanamboatra sy mpamatsy any Shina. Ny volavolainay dia misy lamaody, mandroso, vaovao, mateza ary singa vaovao hafa. Afaka manome toky anao izahay fa ny kalitao avo lenta Fitaovana fanapoahana basy dia amin'ny vidiny ambany. Ny vokatra vokarinay any Sina dia antenaina ho lasa iray amin'ireo marika. Tsy manahy momba ny vidinay ianao, afaka manome anao ny lisitry ny vidinay izahay. Rehefa mahita ny teny nalaina ianao dia hahita ny fivarotana farany indrindra Fitaovana fanapoahana basy miaraka amin'ny fanamarinana CE azo vidiana amin'ny vidiny mora. Satria ny tahirin-tsolika ataonay dia ao anaty tahiry, azonao atao ny mividy fihenam-bidy amin'ny ampahany betsaka aminy. Azonao atao ihany koa ny manome anao santionany maimaimpoana. Manantena ny hiara-miasa aminao.